Achọrọ Ịghọ Onye Ọkachamara SEO? Ngwakọta Semalt Na-enye Azịza
Ị nwere mmasị ịnweta saịtị gị nke ọma na search engine results? Ọ bụrụ na ọ dị otú a, mgbe ahụ, ị ​​ga-amụta ins na outs nke nyocha njikwa search ma gbalịa ịghọ onye ọkachamara SEO. Maka nke a, ị ga-amụta usoro na usoro dị iche iche nwere ike ime ka ọnọdụ gị dịkwuo mma. Ịkwado na nkà nke SEO ga-enweta gị nchọta ndị a chọrọ n'ime ụbọchị ole na ole. Ihe niile ị ga - eme bụ ịmụta usoro na ụzọ dị iche iche - green and white dress for party.
Ross Barber, Onye Nlekọta Ihe Nlekọta Ndị Ahịa nke Semalt , na-akọwa ebe a ka esi ghọọ onye ọkachamara SEO.
Dive n'ime SEO
Nke mbụ, ị ga-amụta isi ihe nke SEO, nke ahụ ga-ekwe omume nanị mgbe ị gụrụ banyere ya na weebụsaịtị na akwụkwọ dị iche iche. Dịka ọmụmaatụ, gaa na nchịkọta akụkọ nke Yoast iji nwee echiche banyere ihe SEO bụ na otu esi ebipụta saịtị gị na nsonaazụ ọchụchọ. I nwekwara ike gbalịa Moz na Search Engine Land iji dọọ n'ime SEO n'ụzọ ka mma. Ndị a ga-enwe ebe nrụọrụ weebụ iji malite na ịghọ onye ọkachamara SEO ka ha na-enye anyị ọtụtụ isiokwu na ozi banyere njikarịcha search engine..Soro ụfọdụ SEO na Twitter na Instagram ma jiri nlezianya hụ ihe ha na-ekere na nhazi ha. I kwesịkwara isonyere òtù Facebook banyere njikarịcha search engine ma chọpụta mmelite ndị ọkachamara ndị ọzọ na-ekere n'ime obodo.
Lelee usoro mmemme
Ihe omume mmemme dị iche iche dịkwa na ntanetị gbasara njikarịcha search engine. Ị nwere ike ịmụta SEO site na mmemme ndị a kwụrụ ụgwọ ma ọ bụ ndị a na-akwụghị ụgwọ. Ị nwekwara ike ịlele blọọgụ SEO na ebe nrụọrụ weebụ ebe ndị ọkachamara na-ekekọrịta atụmatụ na usoro dị iche iche ịmara ọtụtụ ihe banyere SEO dị elu na nke dị elu. Yoast na-enye ụfọdụ SEO isi ma na-ede akwụkwọ mgbe niile maka ndị ọbịa dị iche iche. Maka ndị nwere mmasị ịmụta SEO, nkuzi dị iche iche dị na ịntanetị. Dịka ọmụmaatụ, Moz na Search Engine Land na-enye ndị ọrụ ha ọtụtụ nza ihe SEO. Ị nwere ike ịmụta isi ihe nke SEO, otu esi edee ọdịnaya weebụ magburu onwe ya ma melite mkpokọta nke ebe nrụọrụ weebụ gị, otu esi ejide akụkụ ndị ọrụ ntanetị nke njikarịcha search engine na otu esi etinye akara data ederede na ibe weebụ gị.
Ụdị abụọ nke ndị ọkachamara SEO
E nwere ụdị ndị ọkachamara nyochaa njirimara search, ma ị ga-enwe echiche banyere ha: ndị mmepe maara amazụ ahịa ahịa niile na ndị ahịa na-eji koodu emejuputa weebụsaịtị. SEO mmụta dị mfe karị mgbe ị maara ọdịiche dị n'etiti ndị ọkachamara abụọ a. Ụfọdụ nwere ibu ọrụ maka akwụkwọ ozi ndị ọbịa na ide ederede dị mma, ụfọdụ na-elekwasị anya n'ahịa mgbasa ozi ọha na eze, ebe ndị ọzọ na-etinye uche dị ukwuu n'ịmepụta backlinks na ịwụ na saịtị gị.
Iji bụrụ onye ọkachamara SEO gburugburu, ị ga-amụta ihe niile gbasara ndị ọkachamara SEO abụọ a na otu ha si arụ ọrụ ha n'ụzọ ka mma. Ọzọkwa, ị ga-ama ọkwa nke ọrụ ndị ọrụ uzu na ndị na-abụghị ọrụ nlekọta ọrụ ahụ. Ọ dị mma ịsị na ịghọ SEO ga-ewe oge, n'ihi ya ị gaghị echegbu onwe gị banyere ihe ọ bụla. Naanị ị na-amụ ma mụbaa ihe ọmụma gị iji nweta ihe ịga nke ọma na ụwa nke ịntanetị.